Baarlamaanka Puntland oo maanta dhageysanaya Qudbadaha Musharraxiinta – Kalfadhi
Baarlamaanka Puntland oo maanta dhageysanaya Qudbadaha Musharraxiinta
Maanta, waxaa lagu wadaa inuu Golaha Wakiillada Puntland ku dhageysto xaruntiisa Garoowe qudbadaha Musharraxiinta uu u diiwaan-geliyey iney ka qeyb-galaan tartanka Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Puntland.
32 Musharrax ayaa sugeysa Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland iney midkiiba ka dhageystaan 15 daqiiqo oo hadal-jeedin ah, taas oo isugu jiri doonta Taariikh Nololeedka Musharraxiinta iyo qorshahooda hogaaminta Puntland. Waxay qaadan doontaa hal maalin oo dhameystiran.
32-da Musharrax, 21 ka mid ah waxay u sharraxan yihiin Xilka Madaxweynaha Puntland, waxaana ku jira Madaxweynaha hadda xafiiska jooga, Cabdiwali Gaas, halka 11-ka kale ay u sharraxan yihiin Jagada Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, waxaana iyana ka mid ah Madaxweyne Kuxigeenka hadda xafiiska jooga, Cabdixakiin Camey.
Guddiga Doorashada 7-da Xubnood, ee Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland, ka kooban waxaa habka Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, oo berri ku beegan, ay u dhaceyso ku sheegeen:
Iney qaabka codeyntu tahay shaqsi, sinaan, xoriyad iyo qarsoodi
Iney codadka tirinayaan Guddiga Doorashada
Iney doorashadu ku saleysan tahay Saddex wareeg
In 2-da Wareeg ee hore, Musharrixii helaa 2/3 coddka uu guuleystay
In Wareegga 3-aad uu Musharraxu ku guuleysanayo hal dheeri
Inuu Musharrixii hela 2-da Wareeg ee hore midkood 2/3 codadka uu guuleystay
Haddii si kale loo dhigo, waxaa Wareegga 2-aad ee Doorashada Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa Puntland u soo gudbaya 3-da Musharrax ee ugu codka badan, Wareegga 3-aadna waxaa u gudbaya 2-da Musharrax ee ugu codka badan tartanka Wareegga 2-aad. Hase ahaatee, haddii ay dhacdo in Wareegyada 2-aad iyo 3-aad ay Musharrixiinta ugu codka badan isku tiro helaan, waxaa markale lagu celinayaa cod-bixinta Xildhibaannada ilaa ay Musharrixiintu ku kala haraan.
Laakiin, waxaa intaas sii dheer inuu Musharrax walba soo dirsanayo Wakiil codadka u tiraya ama ula socda, inuu Guddoomiyaha Guddiga Doorashadu hadba soojeediyo halka ay doorashadu mareyso iyo inuu Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Dhoobo Daareed, ku dhawaaqi doono Natiijada Doorashada, oo dhici doonta berry oo ah Talaado (08/01/2019).
Guddiga Doorashada Puntland oo ku dhawaaqay in 32 Musharrax ay diiwaangeliyeen
Golaha Shacabka oo wali ku guuleysan la’ inuu Kalfadhigiisa 4-aad yeesho kulankiisa 33-aad